Budata Yify Apk Maka gam akporo [Ihe nkiri Kacha ọhụrụ] - Luso Gamer
Anyị wetara ngwa ntụrụndụ ọhụrụ a maka ndị ọrụ android akpọrọ Yify Apk. Ugbu a ịwụnye ngwa ahụ n'ime ama agaghị enyere aka na ikiri ọdịnaya vidiyo ọkacha mmasị. Ma ọ na-enyere aka na nbudata na videos site na otu click nhọrọ.
Akụkụ kacha mma gbasara ngwa a bụ na ọ na-enye njikọ iyi iyi dị iche iche. Ugbu a ndị na-ekiri anaghị achọ ka ha chegbuo onwe ha maka mkpọka nke sava ma ọ bụ enweghị ike ịnweta njikọ. Naanị budata faịlụ iyi site na ngwa.
Mgbe nke ahụ gasịrị, tinye njikọ n'ime ngwa iyi ma ọ bụ njikwa nbudata. Weta ngwa ngwa weta ma budata ihe nkiri, usoro na ihe nkiri ndị ọzọ n'efu. Ọ bụrụ na-amasị gị atụmatụ adịchaghị nke ndị Ngwa ihe nkiri wee budata Yify Movie App si ebe a.
Gịnị bụ Yify Apk
A na-ahụta Yify Apk dị ka otu n'ime nyiwe ntụrụndụ ịntanetị kachasị ewu ewu na ewu ewu. Ebe ndị ọrụ android nwere ike ibugharị ihe nkiri na usoro kachasị amasị ha n'efu site na iji otu pịa nhọrọ. Ọzọkwa, ndị ọrụ nwekwara ike ibudata ọdịnaya site na iji iyi faịlụ.
Mgbe anyị nyochara ahịa ntụrụndụ ịntanetị enwere ike iru. Mgbe ahụ, anyị hụrụ na ahịa idei mmiri na dị iche iche adịchaghị nyiwe. Nke a na-ewere dị oke ọnụ na enweghị ike ime maka nkezi ndị ọrụ mkpanaka n'ezie.
Ọ bụ ezie na ndị mmepe na-eme nke ọma n'iweta ụfọdụ nyiwe ntanetị kachasị mma n'efu. Ndị ahụ anaghị achọ ndenye aha ma ọ bụ ndebanye aha. Naanị ihe ha chọrọ ebe a bụ ama na njikọ ịntanetị kwụsiri ike.
Ọbụlagodi ọchịchọ maka usoro nyiwe efu dị n'ịntanetị abawanyela nke ukwuu mgbe ọrịa ọjọọ ahụ mechara. Ma ọtụtụ n'ime nyiwe enwere ike iru bụ ndị nweere onwe ịnweta chọrọ ikike na-enweghị isi. N'ihi ya, ị na-achọ ihe ọhụrụ na pụrụ iche wee tinye Yify Movies Download.
Mmepụta Ụlọ ọrụ LTD
Aha ngwugwu com.wytsHD_8350022
Ọ bụ ezie na ngwa yiri ka ọ dị mfe ma zuru oke iji. Ma na-elekwasị anya android onye ọrụ enyemaka. Anyị ga-ekwu maka nkọwa niile isi obere oge n'okpuru ebe a. Mgbe anyị wụnye ngwa ahụ hụrụ na ọ bara ọgaranya na pro atụmatụ.
Ndị ahụ gụnyere nzacha ọchụchọ dị elu, ngalaba bara ọgaranya, dashboard ntọala omenala, ihe ọkpụkpọ vidiyo arụnyere, sava nchekwa bara ọgaranya na ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ndị mmepe na-akụnye njikwa nbudata a dị elu. Nke ahụ na-enyere ndị Fans aka nbudata ọdịnaya vidiyo.
Vidiyo enwere ike iru na-akwado naanị usoro 720, 1080 na 3GP. Na mgbakwunye, ọdịnaya enwere ike iru nwere ike iri ohere dị ntakịrị n'ihi ntughari dị elu. Ọ bụrụ na ahụ adịghị gị mma na ikiri ọdịnaya n'ịntanetị.
Mgbe ahụ anyị na-akwado ndị fan ka ha buru ụzọ budata ọdịnaya vidiyo site na iji njikwa nbudata. Mgbe ahụ mechaa gbasaa ya na ọnọdụ offline na-enweghị njikọ ịntanetị. N'agbanyeghị na ị na-enwe ntụsara ahụ na nkwanye ndụ na-ebi ndụ mgbe ahụ ị ka mma ijide njikọ kwụsiri ike.
Ị nweghị ike itinye ego ọtụtụ narị dollar. Na ọbụna na-achọ ikpo okwu kacha mma ịntanetị enwere ike iru maka ịkwanye ọdịnaya. Wee budata Yify Movies Apk kacha ọhụrụ site na ebe a ma nwee ọ enjoyụ ikiri ihe nkiri na usoro na-akparaghị ókè n'efu.
Ịwụnye ngwa na-enye ntụrụndụ na-adịghị agwụ agwụ.
Vidiyo ndị ọzọ dị iche iche nwekwara ike ikiri.
N'ihi na ụmụaka bụ iche iche Atiya na-agbakwunyere.
Ihe ọkpụkpọ vidiyo arụnyere arụnyere dị.
Onye njikwa nbudata ga-enyere aka ịnweta faịlụ iyi.
Ihe nzacha ọchụchọ nwere ike inye aka n'ịchọta ọdịnaya vidiyo ọkacha mmasị.
Ncheta ọkwa nwere ike inye aka n'inweta akụkọ gbasara mmelite na mbulite kacha ọhụrụ.
Otu esi ebudata Yify Apk
N'ebe ahụ, ọtụtụ weebụsaịtị na-enye faịlụ Apk ndị yiri ya n'efu. Mana n'ezie, ndị ahụ na-enye faịlụ adịgboroja na ndị mebiri emebi. Yabụ kedu ihe ndị ọrụ gam akporo kwesịrị ime n'ụdị ọnọdụ ahụ mgbe onye ọ bụla na-enye faịlụ ụgha n'ime ngalaba nbudata?
N'ihi ya, ị na-enwe mgbagwoju anya ma na-achọ ebe ọzọ kachasị mma maka nbudata faịlụ Apk kachasị ọhụrụ. Ga-agarịrị webụsaịtị anyị n'ihi na ebe a, naanị faịlụ ndị dị adị ka anyị na-enye. Ka ibudata ụdị faịlụ Apk emelitere biko pịa njikọ enyere n'okpuru.
Anyị etinyelarị faịlụ ngwa ngwa n'elu ngwaọrụ dị iche iche. Mgbe wụnye ngwa faịlụ anyị hụrụ na ọ dị ire wụnye na-eji. Agbanyeghị, anyị enweghị ikike nwebiisinka nke ngwa. N'ihi ya, wụnye ma jiri faịlụ ngwa n'ihe egwu nke gị.
A na-ebipụta ọtụtụ ngwa ntụrụndụ dị iche iche ebe a. Nke zuru oke maka ịnye ihe nkiri na usoro ọhụrụ. Ka inyochaa ngwa ndị ọzọ kacha mma biko soro njikọ ndị enyere. Ndị ahụ bụ 02 TV Series Apk na Movfly Apk.
N'ihi ya, ị gaghị enwe ike ịhapụ otu oge nke ikpo okwu ọkacha mmasị gị. Na ịchọ usoro ntanetị kachasị mma enwere ike ịnweta na-enye ohere ịnweta ọtụtụ ihe nkiri na usoro. Mgbe ahụ, anyị na-akwado ndị download Yify Apk na-enwe free adịchaghị ọdịnaya.
Categories Entertainment, Apps Tags Ngwa ihe nkiri, Yify Apk, Ngwa ihe nkiri Yify, Ngwa ihe nkiri Yify, Yify Movies Download Mail igodo